सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य, विधेयकको मस्यौदा तयार
आगामी असोज महिनाभित्रमा पारित हुने गरी ‘सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५’ को मस्यौदा तयार भएको छ । महिलाको मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक हकलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि उक्त विधेयकको मस्यौदा तयार पारिएको हो ।
सफलताको कथाः १४ वर्षमा ५ हजारको कोख भरियो
ललितपुरको सातदोवाटोस्थित क्रियटर्स आईभिएफ नेपालकी सञ्चालिका वरिष्ठ स्त्रीरोग विशेषज्ञ डा. सानुमैयाँ श्रेष्ठ (प्रधान) टेष्ट ट्यूब बेबी विशेषज्ञ हुनुहुन्छ । अष्ट्रेलियाबाट आफ्नो अध्ययन सकेर सन् २००४ मा नेपाल फर्केपछि डा. सानुमैंयाको निःसन्तान दम्पत्तिलाई सन्तान सुख दिने अध्याय शुरु
आज विश्व मस्तिष्क ट्युमर दिवस । मस्तिष्क ट्यूमरबारे धेरैलाई कौतुहलता हुनसक्छ । हरेक वर्ष ८ जुनलाई विश्व मस्तिष्क दिवसका रुपमा विभिन्न जनचेतनामुलक कार्यक्रमहरुको आयोजना विश्वभर मनाउने गरिन्छ । ट्यूमर र मस्तिष्क क्यान्सर ट्यूमरबारे जनतालाई जागरुक बनाउने यसको
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले मिर्गाैला रोग, क्यान्सर र स्पाइनल इन्जुरी भई पक्षघात भएका बिरामीलाई जीविकोपार्जन भत्ताबापत मासिक रु पाँच हजार उपलब्ध गराउने यसअघिको सरकारले गरेको प्रबन्ध हालको बजेटमा उल्लेख नगरिएकामा आपत्ति जनाएको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष
प्रत्येक मानिसको शरीरमा मिनरल, क्याल्सियम, फेस्फेटको आवश्यकता पर्छ । यसले हाम्रो शरीरलाई मजबुत बनाउन सहयोग गर्छ । हाम्रो शरीरको हड्डी पुरानो भएपछि फेरि नयाँ बन्छ । यो जीवनभरि चल्ने प्रक्रिया हो । प्रत्येक १०–१० वर्षमा मानिसको हड्डी परिवर्तन हुन्छ । जबसम्म
डिएनए परीक्षण: आमाले सन्तानका बाबु भनेका पुरुष बाबु प्रमाणित नहुने घटना बढ्दै
आमाले नै आफ्ना सन्तानका बाबु फलानु हो भनेर तोकिएका अधिकांश व्यक्ति गलत सावित भएका छन् । खुमलटारस्थित राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालामा आउने कतिपय मुद्दामा आमाले आफ्नो सन्तानका बाबु भनेका पुरुष बाबु प्रमाणित नभएको पाइएको हो । प्रयोगशालामा
विश्व लुपस दिवसमा जागरण अभियान
मिर्गौला मानव शरीरको सर्वाधिक महत्वपूर्ण अङ्ग मध्ये एक हो । मिर्गौलाले सही ढंगबाट काम गर्न नसक्दा गम्भीर बिरामी वा मृत्यु समेत हुनसक्छ । प्रत्येक मिर्गाैलाको अत्यन्त जटिल संरचना र कार्य हुन्छ । तिनका दुईवटा महत्वपूर्ण काम हुन्छन्—शरीरमा
जान्नुहोस् मिर्गाैला रोगका लक्षणहरु
अनुहार सुन्निनु अनुहार, पेट र खुट्टा सुन्निनु मिर्गाैला रोगमा प्राय देखिने लक्षण हुन् । मिर्गाैला रोगले गर्दा सुन्निएको कुरा सबैभन्दा पहिले प्राय आँखामुनि देखिन्छ र यो बिहान सबैभन्दा प्रस्ट देखिन्छ । मिर्गाैलाले काम गर्न छोड्नु सुन्निनुको एउटा
जान्नुहोस् क्यान्सरका लक्षणहरु
शुरुवातमै क्यान्सरको लक्षण पहिचान गर्न सकेमा धेरै हदसम्म व्यक्तिलाई बचाउन सकिन्छ । क्यान्सरका धेरै प्रकार हुन्छन् । त्यसैले क्यान्सरका लक्षण पनि अलग अलग प्रकारका हुन्छन् । यहाँ संक्षेपमा केही प्रकारका क्यान्सरको लक्षण बारे जानकारी दिइएको छ ।